China Ogwe Ugo Maka Ugo Ochie China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ogwe Ugo Maka Ugo Ochie - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ogwe Ugo Maka Ugo Ochie)
Okpokoro n'èzí na-ebute Oghere n'elu ìhè
Okpokoro n'èzí na-ebute Oghere n'elu ìhè Ọ dịghị mkpa iji aka na-arụ ọrụ n'ubi na- eburu ìhè dị elu dị ka igwe na-arụ ọrụ na ụtụtụ na-achọpụta ìhè iji mee ka ọ gbanyụọ. Ejikọta ya na ihe eji eme ihe n'ememe nke ọma 300W.Our 100 W na- esi n'èzí na- enye gị ikike ịrụ ọrụ nke ọma 13000lm nnukwu elu...
Ìhè 70W Maka 84lọ 8400lm 5000k
Ìhè nke Igwe mmiri anyị maka 70lọ 70w nwere ike ịmịpụta ihe ruru 8400lm. Ìhè Light Halogen Bulb a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Costco Ìhè . Igwe ọkụ a na-enwu 80w nwere eriri igwe na-agbanwe agbanwe, nke kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị...
30W Led Corn Light Bulb maka HPS 100W
Bbier 30W Led Corn Bulb bụ 3600Lm 5000K na E27 E40 anya, hà 100W incandescent bulb na MH HPS. Ntughari ala ala ala na ikpo ọkụ na-enyere aka na-ekpochapu ọkụ, na-agbasa ume nke 30W Led Corn Light Bulb ruo awa 50000. Mere nke aluminum ụgbọelu ndị ọzọ inogide na mma nke nwere ike inyere ajụkwa a Dugara Ọka Oriọna ngwa...
Ogwe Ugo Maka Ugo Ochie Ogige Ugbo Ochie Ogige Ubi Elu Uzo Ochie Ogologo Uhie Ochie Ogige Ugbo Ohia Ebube Igodo nke Ochie Ogologo Mgbaaka Mgbaze Ebube Uzo Ochie